Manaiky fanamboarana manokana ve ianao?
Ie. Miezaka izahay manolotra sy mamolavola vahaolana namboarina tamin'ny olan'ny famokarana andavanandro amin'ny andriamby andriamby sy rafitra Neodymium andriamby. Manamboatra maherin'ny 70 isan-jaton'ny varotra ataonay ny fanamboarana manokana.
Tsia. Ny habetsahana rehetra dia azo ekena, fa ny vidiny dia mila manitsy ny volanao, satria ny vidin'ny famokarana dia miovaova arakaraka ny habetsany. Ampirisihina ny habetsahana lehibe kokoa mba hampihenana ny vidinao ary avy eo ny vidiny.
Inona avy ireo fepetra fandoavam-bola ekenao?
Azontsika atao ny manaiky ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny T / T, L / C, Western Union, sns. Ny fe-potoana fandoavam-bola dia mety tsy mitovy amin'ny mpanjifa samihafa. Ho an'ny mpanjifa vaovao, mazàna izahay dia mandray petra-bola 30% mialoha sy mandanjalanja alohan'ny fandefasana. Ho an'ny mpanjifa maharitra, avelantsika ny fehezan-teny tsara kokoa, toy ny fametrahana 30% mialoha sy ny fifandanjana amin'ny kopia B / L, ny fametrahana 30% mialoha ary ny fandanjana aorian'ny nahazoana andriamby, fandoavam-bola 100% aorian'ny fandefasana, na 30 andro aza taorian'ny nahazoana andriamby.
Ny fotoana itarihana dia mety miova amin'ny andriamby sy ny andriamby andriamby. Ny fotoana itarihana dia 7-10 andro ho an'ny santionany magnet Neodymium ary 15-20 andro ho an'ny santionan'ny rafitra magnet. Ho an'ny famokarana betsaka, ny fotoana itarihana dia 20-30 andro ho an'ny andriamby tsy fahita firy, ary 25-35 andro ho an'ny fivorian'ny andriamby tsy fahita firy. Mety hiova ny toe-javatra, noho izany dia manolo-kevitra anao izahay hijery miaraka aminao alohan'ny hametrahana baiko, satria indraindray misy fivoriamben'ny andriamby Neodymium mahazatra mety ho azo alefa ara-potoana.
Azonao atao ve ny mandefa andriamby na vokatra andriamby amin'ny alàlan'ny rivotra?
Ie. Ao amin'ny fiaramanidina, misy karazana fitaovana elektronika manan-danja maro izay mora tohina amin'ny herin'ny andriamby. Mampiasa ny fonosana manokana anay izahay mba hiarovana ny herin'ny mavitrika mba hahafahan'ny andriamby halefa amin'ny rivotra soa aman-tsara.
Izahay dia manome antoka ny fitaovanay sy ny fahaizanay miasa. Ny fanoloran-tenanay dia ny fahafaham-ponao amin'ny vokatra. Na inona na inona fiantohana na tsia, kolontsain'ny orinasanay ny miresaka sy mamaha ny olan'ny mpanjifa rehetra amin'ny fahafaham-pon'ny tsirairay.
Ny vidin'ny fandefasana dia miankina amin'ny fomba safidinao hahazoana ny entana. Ny famoahana isan-trano dia matetika no fomba haingana indrindra nefa lafo indrindra. Ny fitsangantsanganana an-dranomasina no vahaolana tsara indrindra amin'ny fandefasana entana mavesatra. Azontsika atao ny manonona ny zotram-pitaterana raha toa ka manoro hevitra amin'ny antsipirian'ny famandrihana, fomba fitodiana ary fomba fandefasana ianao.
Eny, afaka manome ny ankamaroan'ny antonta-taratasy izahay, ao anatin'izany ny famaritana ny vokatra, ny tatitry ny fizahana, ny RoHS, ny REACH, ary ny antontan-taratasy fandefasana entana hafa ilaina.